नेपाल अन्लाईन खबर : अहिले सम्झिंदा सांच्चिकै एका देशको कथा झैं लाग्छ मैले कर्मचारी संचय कोषमा जागिर खा’इरहंदाका त्यी दिनहरु ! एउटा कार्यालयको प्रमूख ब्यक्तिले आफुलाई दिईएको जिम्मालाई ईमान्दारिका साथ निभाई दिएमा आफ्नु क्षेत्रलाई भ्र’ष्टाचारको स्ट’न्टबाट मुक्त गरेर जनतालाई राहत दिन
सकिन्छ भन्ने एउटा बास्तबिक उदाहरणको कथा थियो त्यो
मैले २०२३ साल देखि करिब १२ बर्ष जागिर खाएको कार्यालय क’र्मचारि संचय कोषका प्रशासक श्री परिक्षीत नरसिंह राणाले सत प्रतिसत आफु ईमान्दार भएर ने’तृत्व दिएका कारण त्यसताकाका सबै कर्मचारिहरुलाई आफ्ना सेवा ग्राहि’हरुबाट घु’सको त कल्पनै नगरौं एक कप चिया, एक खिल्ली चुरो’ट
खान त के छुन सम्म पनि हिम्मत गर्न नसक्ने बनाई दिएका थिए। सेवा ग्रा’हिको त’र्फबाट एक खिल्ली चुरो’ट लिईहालेमा कुरा तुरुन्त माथि पुगि सक्थ्यो र त्यस ब्यक्तिलाई अ’पराधी मानेर उत्निखेरै उस्लाई जागिरबाट सदाका लागि घो’क्रेठ्याक लाईन्थ्यो। हायर एण्ड फायरको एउटा क’डा उदाहरण थियो ।
यो कुरा मैले मेरो आत्मकथा “महको म” मा समेत लेखेकोछु । उहाँको नेतृत्वमा काम गरेका कर्मचारीहरु आजसम्म पनि प्रशासकज्यू प्रति ग’र्व गर्दछन। कुरा अझै अलि बांकि छ।
पछि उहाँको का’र्यकाल सकपछि त्यत्रो ठूलो बि’त्तिय संस्था हाँकीरहेका ब्यक्तीलाई अपमान गरे सरह एउटा सानु ईन्धन संस्थनमा सरुवा गरियो।
त्यहा पनि भ्र’ष्टाचार उन्मु’लन गर्ने कार्यमा लाग्नु भो पछि भ्रष्टाचारिहरु सबै मिलेर उहाँलाई नै त्यहाँबाट हटाई दिए ।
परिक्षीत नर्सिंह जस्ता ईमा’न्दार र नैति’कवान कर्मचारीहरु अरु पनि प्रशस्त छन हाम्रो देशमा तर उहाँहरु को को हुन म चिन्दिन ।
सबैको भनौं या मेरो मन जितेको ब्यक्तीहरुमा उनै परिक्षीत नरसिंह राणा पछि उत्तिकै मन जितेका ब्यक्ती हुन कुलमान घिसीङ। उहां’हरु दुबै मेरा न साथीभाई हुन न कुनै ना’तेदारनै। तर दुबैप्रति मेरो आत्म’सम्मान छ।
उहाँ जस्ता ब्यक्तीलाई सरकारले सदु’पयोग गरेर इमान्दारीको पनि अनु’करण हुंदै जावस भन्ने मेरो मनको तमन्ना मात्र हो।
लौ जा एउटा भन्नै छुटेछ। उहाँलाई त्यहिपदमा पून’र्बहाली गर्न नियमले नमिले त्यो भन्दा माथि’ल्लोपदको जिम्मा दिंदा पनि राम्रै हुन सक्छ । कि कसो ?
Previous कोरोनाले गर्दा नेपालि जनता र सरकारले पाएको उप्लब्दी…हेर्नुहोस् ।
Next कुलमान नदोहोरिउन्, तर उज्यालो नहराओस्…पूरा पढ्नुहोस् ।